China CAS 9004-34-6 Cellulose fiber yekuvaka Mugadziri uye Mutengesi |Longou
3. Kuvaka cellulose fiberanogona nyoredispersemune iyo yekupisa yekudzivirira zvinhu uye inoumba matatu dimensional nzvimbo, uye inogonakunwa mvura6-8 nguva pane huremu hwayo.Ichi chimiro chemusanganiswa chinovandudza kushanda kwekushanda,anti-sliding performancezvezvinhu zvacho, uye nokukurumidza kufambira mberi kwokuvaka.
CAS 9004-34-6 Cellulose fiber mufananidzo kuratidza
Type HE30MD, HE50MD, HE100MD...
Hunyoro hwemukati ≤6 (%)
PH kukosha 6.0--8.5
Zvakasara(Ash) ≤6 (%)
Viscosity (2% mhinduro) 3401.00--60000.00(mPa.s, NDJ-1)
2.Tile adhesive,uyetile sealant
3. Kuzvienzanisa pasizvinhu
5. Gypsum-based uye simende-based plaster
6. Kushongedza mortar
7. Mvura yekuvakaproof mortar
8. Mukati nekunzeputty
9. Latex pendi, pende yemavara, pendi yematombo
▲ Iwo machinjiro ekubatanidza masisitimu akaumbwa kuburikidza nekugadzwa kwematatu-dimensional fiber skeletonkuita kuti cellulose fiber iwanekugadzikana kwepamusoro.
▲ Kuzadza muzvikamu zvakabatanidzwa uye kuputika kunowedzera kuvhara kwekuvhara maitiro.
▲ Cellulose fiber mune akawanda maapplication anoita basa reanti-cracking.
▲ Nekuda kwekuwedzerwa nguva dzekuvhura, cellulose fiber inogona kuderedza kuumbwa kweganda.
▲ Pamusoro pesimbakutorwalevel, cellulose fiber ichiri nekuita kwakanaka kwekushanda.
▲ Inogona kuisa mvura yakasara mukati me capillary ye fiber uye kuita nzvimbo yechando pasi kusvika -70℃.
Chigadzirwa Package uye Inokurudzirwa Kushandiswa:
Package: 10kg / bhegi,15kg / bhegi,0kg/bhegi(inogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi)
Thermal insulation Mortar: 4-5kg tani imwe neimwe
Tile Adhesive: 3-5kg manherury ton
Sealant: 3-5kg tani imwe neimwe
Zvakapfuura: CAS 9032-42-2 HEMC yekuvaka kupindwa muropa
Zvinotevera: Granular Cellulose Fiber yeSMA Road kuvaka
Kupfapfaidza Cellulose Fiber yeInsulation uye Sou...